गौतम बुद्धका अमूल्य भनाईहरू जसले तपाईको जीवन बदल्ल सक्छ – CBKhabar.com | Nepali News Portal
By सन्दीप खत्री / ११ माघ २०७५, शुक्रबार १०:४७ 2019-01-25 / बिचार
१. शान्ती आफै भित्र हुन्छ, यसलाई बाहिर नखोज ।२. आफ्नै तर्क र विवेकले स्विकार नगरेसम्म पढेको वा सुनेको कुरामा विश्वस नगर ।३. यदी आफैलाई सच्चा प्रेम गर्दछौ भने तिमीले अरूलाई पिडा दिन सक्दैनौ ।४. हामी जे सोच्दछौ उँही बन्दछौ ।५. उद्यमीका लागि प्रत्येक दिन भाग्योदय हुन्छ ।६. त्यही व्यक्ति धार्मिक हो जसले अर्काको निम्ती त्याग गर्न सक्छ ।७. वितेको समय र आउने समयको चिन्ता नगर, वर्तमान क्षणमाथि नै मनलाई एकाग्र गर ।
८. लगनबाट ज्ञान प्राप्त हुन्छ, लगनको अभावमा ज्ञान हराउँछ ।९. यदी विद्यार्थी तयार छ भने शिक्षक स्वतं उपस्थित हुन्छ ।१०. हमी आफ्नो रिसका लागि होइन रिसद्वार दण्डित हुन्छौ ।११. हजारौ युद्धहरू जित्नुभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो, आफैलाई चिन्नु । यही नै तिम्रो विजय हो । यसलाई तिमीबाट खोस्न सकिदैन न त परीद्वारा न त प्रेतद्वारा ।१२. हाम्रो मस्तिष्कनै सबैथोक हो । हामी जे सोच्दछौ त्यही बन्दछौ ।
१३. शान्ती आफै भित्रबाट आउदछ । यसलाई बाहिर नखोज ।१४. हाम्रो बाटो आकाशतर्फ होइन आफ्नै हृदयतर्फ हुनुपर्दछ ।१५. मैले यो हेर्दिन कि के के गरिसके, मैले यो हेर्दछु कि के के गर्न बाकी छ ।१६. हजार खोक्रा शब्दहरूभन्दा शान्ती दिने एक शब्दनै उत्तम हुन्छ ।१७. जिब्रो एउटा त्यस्तो छुरी हो जसले खुन ननिकाली काट्न सक्छ ।
१८. हज्जारौ मैनबत्ती एउटा मैनबत्तीको प्रकाश कम नगराइ जलाउन सकिन्छ । यसरी नै खुसी बाढ्दा बढ्ने गर्छ ।१९. आफ्नो उद्दारको लागि स्वयंमा निर्भर रहनुपर्दछ, अन्यमा होइन ।२०. धार्मिक त्यही हो जसले अरूका निम्ती त्याग गर्न सक्छ ।२१. एउटा पुरै गाग्री थोपा थोपा पानीले भरिने हो ।२२. घृणा घृणाद्वारा घट्दैन बल्कि यो प्रेमद्वारा घट्दछ, यो शास्वत नियम हो ।
२३. स्वास्थ्य सबैभन्दा महान् उपहार हो, संतोष सबैभन्दा ठूलो धन र विश्वसनीयता सबैभन्दा उत्तम सम्बन्ध हो ।२४. विगतमा ध्यान नदेउ, भविष्यको सपना नदेख, वर्तमानमा आफ्नो ध्यान लगाउ ।२५. जो मानिस दोश्रोको इर्ष्या गर्दछ, उसको मनमा कहिल्यै शान्ती मिल्दैन ।
मध्यरातमा संसद विघटन गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि चुनावको मिति घोषणा ११ माघ २०७५, शुक्रबार १०:४७
सांसदहरु दोहोरिएपछि प्रधानमन्त्रीमा ओली र देउवाको दाबी नपुगेको राष्ट्रपतिको ठहर ११ माघ २०७५, शुक्रबार १०:४७
आज मात्रै २१४ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु ११ माघ २०७५, शुक्रबार १०:४७
नवलुरमा थप १० दिन निषेधाज्ञा लम्ब्याइयो ११ माघ २०७५, शुक्रबार १०:४७
कोरोनाबाट चितवनमा एकैदिन १५ जनाको मृत्यु ११ माघ २०७५, शुक्रबार १०:४७